Galmeewwan Barruutiif Guutiinsa Jechaa
LibreOfficen jechoota tursa ammee keessatti deddeebiidhaan fayyadamtu walitti siif qaba. Yammuu ati qubee jechiichaa sadii barreessiitu, jechiicha LibreOffice ofumaan xumuura.
Yoo ofiinSirreessaa keessa jechii tokkoo ol ta'uu warra qubeewwan sadii ati barreessiitiin walgitu ta'e, jechoota jiran keessa marsuuf, AjajaCtrl+Tab dhiibi. Kallattii faallaan marsuuf, AjajaCtrl+Shift+Tab dhiibi.
Guutiinsa jechaa fayyadamuu
Durtiin, furtuu Galchii dhiibuudhaan, guutummaa jecha fudhadhata.
Xumuura jecha tufachuuf, barreessuu furtuu kamiyyuun itti fufi.
Xumuura jecha dhaamsuu
Meeshaalee - OfSirreessaa - Guutiinsa Jechaa filadhu.
Guutiinsa jechaa dandeessissaa haqi.
Title is: Galmeewwan Barruutiif Guutiinsa Jechaa